Dowladda oo soo rogtay nimdaam lugu ogaanayo da’da magangalyo doonka | Somaliska
Nidaamkan cusub oo ka kooban labbo nooc ayaa kala ah in baaritaan lugu sameeyo ilkaha (ilkaha qaar) iyo jilibka( kala goyska jilibka). Warsaxaafadeed maanta oo jimca ah ay soo saartay hey’adaasi ayaa ku soo bandhigtay labadaas nidaam oo lugu baarayo da’da saxda dhalaanka keli socdka ah ee dalkaan Iswiidhan magangalyada weydiista.
Ma ahan oo keliya baarista lugu sameeynayo ilkaha iyo jilbaha ee waxaa sidoo kale raajo la saari doona xagga hoose ee lugta cajirka ku dhamaado, taasoo kolkii hore lugu sameyn jiray da’da u dhaxeeysa 22 ilaa 28 jir.
Waayo aragnimo laga dhexlay baaritaano horey loo sameeyey, ayaa muujin jirtay in kala goyska jilibka aan sax ah u muuqan jirin, mana jirin wadan tijaabadaas ama baaritaankaas lugu soo sameeyey. Sababtaas ayey waaxda sharciga daaweynta u dooneeysa in ilkaha iyo kala goysyadda jilibaha lugu sameeyo baaritaan muuqda. Sawir kasta oo laga qaado ilkaha iyo jilbahana waxaa qiimeyn ku sameyn doona labbo qabiir uu soo gudbinaya aragtidooda ku aadan.
Sanadkii ina dhaafay waxaa Iswiidhan soo galay dhalaan keli socod ah oo gaaray 35.000, sgaal ka mid ahina ay wiilal ahaayeen. Sanadkan waxaa ay hoos uga dhacday tiradaasi 1 700. Laanta socdaalkana waxaa ay diiwaan gelin jirtay da’da ay sheegtaan dhalaankaasi oo ay u arkayeen ineey tahay macquul, hase ahaatee baaritaanka xagga da’da oo dib ka sameyn jirtay marka la guda galo codsigooda magangalyo doon.
Bishii diseember ee sanadkii hore ayey maxkamadda sare, waxaa ay sheegtay in raajo la saaro ilkaha ay yihiin hab sax ah oo lugu qiimeyn karo da’da haddii ay timaado fal dembiyeed.
Xigasho: Shaxda raad raaca laanta socdaalka.
September 9, 2016 at 14:02
Asc aqayaarta ayaan taan yaa war ka haayo arinta dadka lagu heestay arinta 2 sano dadki xageey beey galeen warkooda lama haayo aniga jawaab ayaan ka sugoowaa magareshinka tack!
Wcs salmo aniga kula mida. Dadki wey quusteen wax jwb lama haayo lkn anaga nov 2015 aan xareynay. Adiga handlägare ma hesheen? DNA ma marteen? Mase weydiise waxa la idinku heesto.
Umsumaya hänlegar malihin wali lakin odaygeeyga ayaa intar fuyuu laga soo qaaday bisha sideedaad dhamaad keeda arinteena mudeey soo jiitameesay insha allaah waxi soo daahaa qeerka ku jiraa Tack!
Abaayo ilaah ha ka soo qaado wey la soo daaheen. Qof wax la siiye ma aragtay. 2 sano isla jooga aa umada lagu dhibay. Kheer allaha ka dhigo.
alaha inoo sahlo sharciga dhamaantena
Aniga questioner ayey isoo direen waanan ku celiyey jawaab ayan hada ka sugayaa insha Allah khayr wali qof waxaa loo soo diray ma jiraa maxad igu soo kordhin kartaan